Laablaabyada isku laabma: ku dar waxoogaa fududayn noloshaada mashquulka ah.
Bogga ugu weyn blog Kabaabyada isku laabma: ku dar waxoogaa fududayn noloshaada mashquulka ah
Kabaabyada isku laabma: ku dar waxoogaa fududayn noloshaada mashquulka ah
Taariikhda ： 2021-07-30 Qeybaha ：blog Muuqaalada ： 1,380 aragti
Cirku waa cad yahay oo xoog badan yahay, ubaxyada buuruhu way soo baxayaan, waana waqtigii la fuuli lahaa sannadka dagaalka. Waxaa jira noocyo badan oo ebikes ah, laakiin midka ugu badan oo ugu caansan waa inuu ahaadaa a laab -laabashada. Haddii ay tahay socdaalka magaalada, dalxiisyada firaaqada, jirdhiska isboortiga, ama safarada baaskiilka, noocaan ah “gaadiidka cagaaran ee isku laabma” ayaa dadweynuhu aad u jecel yihiin.
Socdaalka iyo ka -noqoshada shaqada dhawaan, waxaan arkay in rag iyo dumar aad u qurux badan ay doortaan hababka soo socda ee gaadiidka: baabuurta korontada ee laaban karo. Haa, waa baabuur koronto oo laaban karo. Sababtoo ah tirada yar, waxay si xor ah ugu safri kartaa xitaa waddooyinka ciriiriga ah. Marka la barbardhigo gaadiidka dadweynaha sida basaska iyo tareenada dhulka hoostiisa mara, adeegsiga baabuurkaan korontada yar ayaa sidoo kale ku raaxaysan kara muuqaalka iyada oo aan loo dulqaadan doonin dareenka “ciriirinta” ee garbaha xoqidda. Kadibna gawaarida korontada ee laalaaban ee soo socda ayaa aad ugu habboon kuwa cusub.
1, ebikes oo isku laabma 20 inch aluminium aluminium A2AL20
A2AL20 leeyahay bandhigay LCD-Multi-function. Waxa intaa ka sii badan, oo ay naqshadeysay oo soo saartay warshaddeenna, oo ay fududahay in la xakameeyo tayada, waxay muujin kartaa Fogaanta, Mileage, Heerkulka, Voltage, Code Error iyo in ka badan. Waxaad si sahlan ugu isticmaali kartaa buugga. Nalalka cusub ee laydhka cusub ee 3W LED-ku waxay u qalabaysan yihiin fuulitaanka habeenkii, oo ay gacanta ku hayaan bandhigyo badan oo LCD ah, ka nabdoon oo ka sahlan.
Iyada oo leh 5V1A USB -ga taleefanka gacanta ee taleefanka gacanta, marka taleefankaagu ka baxo korontada, ka jawaab xaaladaha degdegga ah. Aluminium aluminium isku laab laab 6061 aluminium aluminium ebike jir leh wax qabad aad u fiican, astaamaha alxanka weyn iyo korantada, iska caabinta daxalka wanaagsan iyo adkaysiga sare. Rakaabka dambe ee lithium batari. Sanduuqa baytariga waa laga saari karaa si aad baaskiilka ugu kaxayn karto ama si gooni ah qolkaaga.
2、20 inch 36v oo isku laabma taayirrada taayirrada dufanka leh A7AM20
A7AM20Bike baaskiil koronto oo taayirro duuban oo leh bareega hore iyo gadaal 160 bareeg disc ah iyo tuubbo laba-tuubbo ah si loo hagaajiyo xoog (ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay kuwa waaweyn), 20 inji oo isku laabaya aluminium aluminium, cabbir yar, culeys ka fudud 26/28 inch ebike barke . Awood leh 250/350 watt baaskiil koranto oo dufan leh oo leh mootooyin gaar ah oo ay weheliso batari weyn oo 36/48-volt ah oo awood u leh inuu culeys badan saaro oo uu ka baxo waddooyinka wasakhda ah ee buuran, baytarigu waa mid la saari karo oo xitaa rakooyinkii waa la qaadi karaa
Nalalka tayada LED-ga (xagga hore ayaa isku dhejinaya batteriga ugu muhiimsan), fareebka farsamooyinka farsamada, feejignaanta celcelis ahaan laakiin waxaad helaysaa todoba xawaare si aad u gaabiso ama si deg deg ah u dhaqso
3、36V350W isku-laabashada marwooyinka qoyska A1-7
A1-7Motor matoorkeeda bilaa burushku wuxuu siin karaa awood ku habboon baaskiilkan korontada ah ee isku laabma, waa ka xoog badan yahay oo waxtar badan yahay. Waxtarka sare wuxuu ka badan yahay 80%. Baaskiilkaan wuxuu leeyahay 250w ama 350w matoor aan caday lahayn, iyo 10AH batari lithium ah. Xawaaraha ugu badan ee baaskiilka korontada ah ee la isku laaban karo waa 25-32km/h, iyo xadka ugu sarreeya waa 40-60KM. Bateriga baaskiilka korantada ah ee isku laabma wuxuu ku qarsoon yahay qaab-dhismeedka iyo naqshadeynta biyuhu, iyo waqtiga ku-dallacidda baytarigu waa 5-7 saacadood oo keliya oo xaddiga ugu sarreeya waa 40-60KM.
Nidaamka bareegga baaskiilkan korontada ah wuxuu bixiyaa bareeg aad u fiican, iyo waxqabad xaalado qoyan iyo dhiiqo leh. Waxay hubin doontaa saafigaaga markaad bareejineyso. Baaskiilkan korontada leh wuxuu leeyahay laydh LED ah oo hubiya in si cad loo fuulo raacista habeenkii, sidoo kale waxay leedahay deked ku shubata USB, markaa marka taleefankaagu ka dhammaado korontada waxaad isticmaali kartaa inuu ku dallaco taleefankaaga. Taayirada ebike ee isku laabma waa 20 inji, waxaanan kugula talineynaa dadka dhererkoodu yahay 145cm-185cm inay fuusho, culeyska ugu sarreeya ee taageerayana waa 150kg.
Marka la soo koobo, dhammaantood waxay mudan yihiin in la tixgeliyo, markaa haddii aad xiisaynayso midkood, nala soo xiriir.
Ka hor: Taariikhda horumarinta baaskiilada korontada
Next: Talooyinka amniga ee isticmaalka baaskiilada korontada
Bareega baaskiilka: Sida loo hagaajiyo bareegyada baaskiilka